Para Kuraasta Banaanka Ee Dadweynaha - Joornaalka Naqshadeynta
Kuraasta Banaanka Ee Dadweynaha
Kuraasta Banaanka Ee Dadweynaha Para waa nooc ka mid ah kuraasta bannaanka ee dadweynaha ee loogu talagalay in lagu bixiyo dabacsanaan la xakameyn karo marka la joogo goobaha bannaanka. Kuraas dhowr ah oo leh qaab qaab isku mid ah oo gebi ahaanba ka weecanaya isku dheelitirnaan muuqaal ahaaneed oo qaab dhismeedka kursi caadiya ah Oo ay dhiirrigelisay qaab fudud oo loo yaqaan 'sawaw qaabka', xirmooyinka kuraasta bannaanka ayaa geesinimo leh, casri ah oo soo dhoweynaya is dhexgalka. Labadaba leh culeys culus oo culus, Para A waxay taageertaa wareegga 360 ee ku wareegsan salka, iyo Para B waxay taageertaa rogaalka labada dhinac.
Magaca mashruuca : Para, Magaca naqshadeeyayaasha : Mian Wei, Magaca macmiilka : Mian Wei.
Kuraasta Banaanka Ee Dadweynaha Mian Wei Para